News | गाउँपालिका
News | Tag: गाउँपालिका
गौमूल गाउँपालिकामा एमाले विजयी
बाजुरा, असार १६ । गौमूल गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरी विहेमै कुटपिट गरेपछि सुनकोशी गाउँपालिका प्रमुख जिसी पक्राउ
काठमाडौं, असार ८ । मापक पदार्थ सेवन गरी सर्वसाधारणमाथि हातपात गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिका प्रमुख श्रवण जिसी पक्राउ पटि रिहा भएका छन् ।
बलेफी गाउँपालिका प्रमुखमा एमालेका केदार क्षत्री विजयी
काठमाडौं, जेठ ३ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गाउँपालिका प्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार केदार क्षत्री विजयी भएका छन । उनले माओवादीका उम्मेदवार गंगाबहादुर तमाङलाई १७४ मतले पराजित गरेका हुन् ।
उम्मेदवारको चुनाव चिह्नः कट्टुदेखि मःमः सम्म
काठमाडौं, वैशाख ७ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि करीब ६० प्रतिशत मतपत्र छपाई गरेको बताएको छ । अहिले जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतपत्र छापिरहेको छ ।
एक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा
काठमाडौं, चैैत २९ । आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकका सबै ७४४ स्थानिय तहमा बैंकको शाखा खुल्ने भएका छन् ।
७४४ स्थानीय तहमा कति हुन्छ जनप्रतिनिधिको संख्या ? यस्तो छ व्यवस्था
काठमाडौं, चैत्र ८ । संघीयता कार्यन्वयन सुरु भएसँगै स्थानीयत तहको पुनर्संरचना कार्यन्वयनमा आएको छ । तल्लो तलहमा साविकको गाउँ विकास समिति र त्यसअन्र्तगतका वडाहरु भंग गरेर सरकारले गाउँपालिको अवधारणा कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा यसरी हुन्छ जनप्रतिनिधिकाे निर्वाचन, जान्नै पर्ने तथ्य
काठमाडौं, चैत्र १ । सरकारले गत शुक्रबारबाट ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि स्थानीय निकायको रुपमा रहेका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरु स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत भएका छन् ।
जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले अब स्थानीय तहको रुपमा काम गर्नेछन् ।
संविधानको धारा २१४ को उपधारा (४) मा व्यवस्था भएअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकारी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ ।
हेर्नुस तपाई कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पर्नुभयो ?
काठमाडौं, फागुन २८ । सरकारले स्थानीय तहको संरचना राजपत्रका प्रकाशित गरेसँगै पुरानो संरचनाको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरु विघटन भएका छन् । अब स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएको छ ।
साविकका गाविसहरु वडा कार्यलयमा रुपान्तरण भएका छन् । अब ७४४ वटा स्थानीय तहको संरचना आजैबाट कार्यन्वयनमा आएको छ ।
७४४ स्थानीय तह आजैबाट कार्यन्वयन, यस्ता छन गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्र
काठमाडौं, फागुन २८ । सरकारले गाउँ विकास समितिहरुको संरचना आजैदेखि भंग भएको घोषणा गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गाविस संरचनाहरु विघटन भएको घोषणा गरेका हुन् ।
मुम्बई—पोर्न स्टारका रुपमा पहिचान बनाइसकेकी सन्नी लियोन अहिले बलिउडकी लोकप्रिय स्टारमा गनिन्छिन् । सन्नी लियोनको जन्म १३ मई १९८१ म क्यानडामा पन्जाबी शिख परिवारमा भएको हो ।
यस्ता आचरण भएका व्यक्तिले गर्छन् धेरै सेक्स
यसकारण उज्यालोमा संभोग गर्न चाहदैनन् युवतीहरु